Ubuntu 16.04 LTS yatove nezita: Xenial Xerus | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 16.04 LTS yatove nezita: Xenial Xerus
Tichakamirira Ubuntu 15.10, isu tatoziva zita reUbuntu 16.04 LTS, ichatumidzwa Xenial Xerus
Isu tese takamirira kuburitswa zviri pamutemo kweUbuntu 15.10 Willy Werewolf, izvo zvisingafanirwe kutora nguva kuti zvibude sezvazvakange zvakarongerwa nhasi. Zvichakadaro isu tichafanirwa kugadzirisa iyi nhau, uye ndizvozvo zvinotozivikanwa kuti richava chii zita idzva rinotevera Ubuntu refu rutsigiro system, ndiko kuti, vhezheni 16.04.
Zita rakasarudzirwa basa iri ndi Xenial Xerus, iyo yakasarudzwa nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka:
Imba mhando: Zvakajairika muCanonical kusarudza aya mazita asingazivikanwe saPacific Pangolin kana Willy Werewolf, ari mazita ayo zvinokwezva kutarisisa kwakawanda uye zvinonzwika zvine simba rakangofanana.
Xenial: Xenial zvinoreva hushamwari, uye yakasarudzwa nekuti ivo vanotsvaga kugadzira iyo system ine hushamwari kune vashandisi vanozvibata.
Xerus: Izita remarudzi eAfrica, kunyanya a squirrel, iyo inokurumidza, yemagariro uye ine hushamwari. Yakasarudzwa nekuti ivo vanoda kugadzira iyo fluid system ine yakanaka network yekubatanidza.
Iyi sisitimu ichatevera yakasarudzika Ubuntu kuburitsa mutsetse, iine sisitimu nyowani inobuda yega yega mwedzi mitanhatu uye yakareba rutsigiro system makore maviri ega, saka tichava nehurongwa huripo Kubvumbi 2016 nemhando dzakasiyana (Xubuntu, Edubuntu, Ubuntu Mate…).
Kana zviri izvo zvichaunzwa nesisitimu ino, hapana kana chinhu chinozivikanwa, Sezvo Ubuntu 15.10 isati yatoburitswa nazvino, saka zvakanyanyisa.
Kana zviri Ubuntu 15.10 iyo yepamutemo vhezheni haisati yabuda, tinovimba kuti zvichadaro zuva rese sezvakarongwa kana mangwanani mangwana mangwanani. Paanongobuda, pachave nechinyorwa chakakumikidzwa kwachiri chakagadzirwa neni kana nevamwe vangu vachitsanangura nhau dzacho uye mashandiro acho.
Kana iwe usingakwanise kumirira kusunungurwa kwekupedzisira, zviyeuchidze iwe kuti iyo Ubuntu kusunungura mukwikwidzi 15.10, mauri uine vhezheni yakafanana chaizvo neshanduro yekupedzisira, asi iine zvimwe zvipembenene.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 16.04 LTS yatove nezita: Xenial Xerus
Yekupedzisira Ubuntu iri kunze http://releases.ubuntu.com/15.10/
Pindura kuna antonio8909
Sekuziva kwangu mahanduro ane rutsigiro rurefu makore maviri ega ega (10.04 12.04 14.04 16.04)
Kujekeswa kudiki. Ubuntu LTS shanduro ndedzese makore maviri, kwete gore rega sekutaura kwechinyorwa. Kwaziso.
Right, zvakandisiya, ndobva ndazvichinja.
Zvakaringana kuti mumwe ataure, havadi kuita kunge vane hungwaru nekujekeserwa kwavo kunotaura zvakafanana nezvakaitika kare. Kune rimwe divi, chinondishamisa ndechekuti vanozopedzisira vasarudza kutumira Mir se server yemifananidzo here kana kuti kwenguva iyo yavanosiya yakatsiga uye yakavimbika X. Kubva pane zvakataurwa pamusoro pezita zvinoita sekunge 16.04 ichave yekupedzisira kuburitswa ne X nekutadza. Ndinovimba kudaro ndokusiya Mir yezvemangwana editions.
Zvino Xubuntu Xenial Xerus 16.04 ichave iri Xubuntu XXX nyowani.Ndinoshamisika kana ichingova yevanhu vanopfuura makore gumi nemasere ekuberekwa?
Francisco Martinez akadaro
Handizive kana pakupera kweZ vanotangazve neA, kana zvirizvo, vaizoisa "Perry Platypus" mutsamba P?
Pindura kuna Francisco Martinez
Nongedzo: gadzira yako wega Steam Machine
Q4OS + XPQ4: teedzera Windows XP maitiro zvakadzama